Madaxweynaha Jubbaland Oo Ka Hadlay Ammaanka Muqdish.
February 12, 2018 - Written by Kulmiye
Axmed Madoobe ayaa sheegay shirarkii ugu dambeeyay ee ay yeelanayeen in ay ku baaqayeen in la dadejiyo Maqaamka Caasimadda, wuxuna sheegay in isaga uu horboodi doono dadka u doodaya Maqaamka Muqdisho, taasi bedelkeeda wuxuu dalbaday in la yareeyo in la isku xanto arrintan.
“Waxaa aad looga hadlaa Gobolka Banaadir, Caasimadda, Maqaamka, xagee laga heystaa horta ? laakiin marka wax la sheeg sheegayo waxbaa afka la isku saar saaraa, mar waxaa la yiraahdaa Madasha iyo Baarlamaanka ayaa heysta, Waxaan is leeyahay arrintaasi waa mid Dastuuri ah, dhowr jeerna waan ka hadalnay, shirarkii uga dambeeyay waxaan uga hadleynay in la dadejiyo Maqaamka, aniga ayaana horgal u noqon doona, waxaan rajeynaa arrintan in hada kadib aanan la isku xaman doonin.” Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) Madaxweynaha Maamulka Jubbaland ayaa hadalkan ka sheegay xilli xalay uu magaalada Muqdisho uga qeyb galay Munaasabad casho sharaf aheyd oo Maamulka Gobolka Banaadir uu u sameeyay Madaxda Dowlad Goboleedyada oo ka qeyb galay shirka Golaha Amniga oo 10-kii bishan la soo gaba gabeeyay.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo 21-kii bishii January 2018 uu xilka ka qaaday Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay waxyaabaha xilkiisa uu ku waayay in ay ka dhasheen laba arrimood oo kala ah xasiloonida iyo nabadgelyada Gobolka Banaadir iyo shirka wadatashiga Nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo looga hadli lahaa maqaamka Muqdisho, waxayna tani muujineysaa in Madaxda Dowladda Federaalka aysan la dhacsaneyn Maqaamka Caasimadda.